မဟာ Alaskan Husky - သင်သိထားသင့်သည့်အရာ - Breeds
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကုတ်အင်္ကျီအရောင်နှင့်အတူရုံ Siberian Husky တူသောခွေးကိုဖူးမြင်ဖူးသလော ဒါကဖြစ်ကောင်းတစ်ခု Alaskan Husky ဖြစ်ခဲ့သည်။
Alaskan ပြာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်လူသိများကြသည် sleds ဆွဲ ။ ထိုထက်ပိုသောဤခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ကြသည် သစ္စာစောင့်သိခြင်း , ဒါကြောင့်သူတို့ကအများဆုံးမိသားစုများမှပြီးပြည့်စုံသောထို့အပြင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Alaskan Husky ကိုပိုမိုသိကျွမ်းလိုပါသလား။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အဆိုပါ Alaskan Husky ရဲ့မူလအစ
Alaskan Husky ဆိုတာဘာလဲ?
သဘာ ၀ ကျသောခွေးတစ်ကောင်
Alaskan Husky လေ့ကျင့်နည်း
Alaskan Husky သည်လေ့ကျင့်ခန်းမည်မျှလိုအပ်ပါသလဲ။
ဒီ Husky မှာဘာကျန်းမာရေးပြissuesနာတွေရှိနိုင်သလဲ။
Alaskan Husky ဘာစားသင့်သလဲ။
သင့်ရဲ့ Alaskan Husky ဖြည့်တင်း
Alaskan Husky ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
Alaskan Husky သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောခွေးဖြစ်ပါသလား။
Alaskan Husky သည် Husky အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သီးခြားမျိုးစိတ်မဟုတ်ပါ။
ဤသည်ခွေးတစ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်အဓိကအားရပ်ကြီးခဲ့သည် အလုပ်လုပ်ခွေး sledding အတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုရန်။
ဤသည်အားကြီးသောခွေးကတီထွင်ခဲ့သည် mushers သို့မဟုတ်လူ့ခွေးကွဲပြားခြားနားသောဇာတိကနေပြိုင်ကားသမား ခွေး Inuit ဝတ်။
ဤအမျိုးကွဲအချို့ပါဝင်သည် ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky , Alaskan Malamute Eskimo ခွေးဂျာမန် Shorthaired Pointer, Border Collie , ဂျာမန်သိုးထိန်း , Inuit Husky နှင့် ထီးနန်း။
အသုံးပြုသောသွေးကြောကျဉ်းသည်မျိုးဆက်တစ်ခု၏သီးခြားရည်ရွယ်ချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါကြောင့်မျိုးဆက်ကပြိုင်ပွဲအတွက်လမ်းပြခွေးတစ်ကောင်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူဟာစင်ကြယ်တဲ့သားပေါက်လေးကိုအတူတူမွေးဖွားလိမ့်မယ် ညွှန်ကိန်း နှင့်ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky ။
2015 ခုနှစ်တွင် , သူတို့ရဲ့ရှိနေသော်လည်း - ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ကွဲပြားခြားနားမှု - Alaskan Husky၊ Alaskan Malamute နှင့် Siberian Husky အားလုံးတွင်ရှိသည် အလားတူမျိုးဗီဇအမှတ်အသားများ နှင့်၏ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်ကြသည် Chukotka စွတ်ဖားခွေး ဆိုက်ဘေးရီးယား၏။
Alaskan Husky သည်သူ၏စိတ်ကူးကြောင့်ပြိုင်ကားခွေးစာရင်းတွင်လျင်မြန်စွာလူကြိုက်များခဲ့သည် မြန်နှုန်း။ ယနေ့စွတ်ဖားကွင်း၌ခွေးလူမျိုးများတွင်တွေ့ရသောပြာအများစုသည် Alaskan Huskies ဖြစ်သည်။
Alaskan ပြာဖြစ်ကြသည် ပိုကြီးတဲ့ ဆိုက်ဘေးရီးယားပြာထက်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကပိုပါးတည်ဆောက်ရှိသည်။ သူတို့၏ဆိုက်ဘေးရီးယားနှင့်မတူဘဲဤအလက်စကာရှိခွေးများသည်အများအားဖြင့်မျက်လုံးညိုသည်။
ဤ Crossbreeds တွင်ရှည်လျားသောခြေထောက်များ၊ နက်ရှိုင်းသောကျယ်ပြန့်သောရင်ဘတ်နှင့်ကျောကုန်းသောကျောရိုးရှိသူတို့၏အမြီးများရှိသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် ဝံပုလွေကဲ့သို့ အသွင်အပြင်၌။
ဤအပြာများသည်မီးခိုးရောင်၊ အဖြူ၊ အနက်နှင့်အဖြူ၊ ဆံပင်ရွှေရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အညိုရောင်၊
သူတို့ရဲ့အင်္ကျီတွေပဲ အရှည်အလတ်စားမှတိုတောင်း ဘယ်တော့မှမရှည်။ သူတို့ရဲ့တိုတောင်းသောအင်္ကျီကိုအတွက်ကူညီပေးသည် အပူလွန်ကျူး သူတို့လူမျိုးအတွက်ယှဉ်ပြိုင်သောအခါ။
၄ င်းတို့တွင်အလွန်လေးသော undercoat များနှင့်စွတ်ဖားတစ်ခုအားဆွဲနေစဉ် element များ၏ကာကွယ်မှုကိုပေးသည့်ပိုမိုသိသိသာသာထိပ်တန်းအင်္ကျီများရှိသည်။
ဒီ Husky ကဘယ်လောက်ကြီးလဲ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားလေး Alaskan Husky အကြားပုံမှန်အလေးချိန်ရှိတယ် 40 မှ 60 ပေါင် (၂၁ မှ ၂၅ ကီလိုဂရမ်) အရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသမီးသည်အလေးချိန်ရှိနေစဉ် 35 မှ 55 ပေါင် (17 မှ 19 ကီလိုဂရမ်) ။ လိင်နှစ်ခုစလုံးတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရှိသည် ၂၃ မှ ၂၆ လက်မအမြင့် ရင့်ကျက်မှာ။
Alaskan ပြာတစ်ရှိသည် သာယာတဲ့အပြုအမူ သူတို့ရဲ့ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky နှင့် Alaskan Malamute ဝမ်းကွဲထက်။ ၄ င်းတို့သည်သဘောသဘာ ၀ ရှိပြီးသူတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများအတွက်ဖော်ရွေသည်။
သူစိမ်းများကိုသိလိုသည်မှာဤ Huskies များသည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောလူများကိုဟောင်မည့်အစားနှာစောင်းရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
Alaskan Husky သည်မိသားစုခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူသည်လူနှင့်အခြားခွေးများကိုချစ်ခင်ပြီးသူအဖြစ်လူသိများသည် စိတ်အားထက်သန် cuddler ။ သူသည်သူ၏လူ့မိသားစု၏ကုမ္ပဏီကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးလွှမ်းမိုးမှုကိုမဟုတ်ဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ခုန်ချခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။
ဒီခွေး ခဲပြင်းထန်တဲ့ရရှိသွားတဲ့ , သို့သော်ကလေးငယ်များနှင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုကြီးကြပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်မျှော်လင့်မထားသောဖြစ်ရပ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေသည်
Alaskan Huskies ဟောင်လား?
Alaskan Huskies သည်ဆင်ခြေလျှောများဆွဲရာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးပြိုင်ကွင်း၌အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ သို့သော်သူတို့သည်စောင့်ကြည့်သူများမဟုတ်ပါ။ ဤအ hybrids ဖြစ်ကြသည် ဟောင်ဝါသနာပါ ; ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောခြိမ်းခြောက်မှုများကိုသတိပေးရန်သူဟောင်မည့်အစားသူစိမ်းများကိုသာကြည့်လိမ့်မည်။
သို့သော်သူတို့၏ဆိုက်ဘေးရီးယားဝမ်းကွဲများကဲ့သို့ဤခွေးများ ညည်းတွားသံ ။ အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်သူတို့မြည်တမ်းကြလိမ့်မည်။
သင်၏ Husky သည်၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအစပျိုးစက်များကိုအိမ်တွင်ပရိဘောဂအသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အပြင်ဘက်မှ ဖြတ်၍ လူနာတင်ကားကဲ့သို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
Alaskan ပြာအသိဉာဏ်ဖြစ်ကြပြီး လေ့ကျင့်ရေးတုံ့ပြန်မှု ။
သင်ကိုယ်တိုင်ကိုတည်ထောင်ရန်လိုသည် pack ကိုခေါင်းဆောင် နှင့် Alaskan Husky လေ့ကျင့်သည့်အခါမြဲမြံပါစေ; ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကခေါင်းကိုက်နှင့်မကောင်းသောအဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်ဤခွေးတစ်ကောင်သည်ဖြစ်သင့်သည် လေ့ကျင့်သင်ကြား အဖြစ်အစောပိုင်း puppyhood အဖြစ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ၈ ပတ် , Alaskan Husky အခြေခံ command ကိုသင်ယူဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကိုထားရှိသင့်ပါသည် တိုသည် သူ့ကိုစပ်စုခြင်းနှင့်အသစ်သောအရာတို့ကိုလေ့လာသင်ယူရန်။
အပြုသဘောအားဖြည့် ဒီ Husky အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ် ခွေးအများစုကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်ပြစ်ဒဏ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြုမူဆက်ဆံတတ်ကြသည်။
အဆိုပါ Alaskan Husky လည်းများများရသင့်ပါတယ် လူမှုရေး အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သေးတုန်းပဲ။ သူ့ကိုအိမ်ထောင်စုရှိအခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရန်အချိန်ယူပါ။
သင့်ရဲ့ Husky သင့်စကားကိုနားထောင်ရန်ရယူခြင်း
သင့်ရဲ့ Alaskan Husky နဲ့လေ့ကျင့်မှုမစခင်မှာသင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထူထောင်ပြီးပြီဆိုတာသေချာပါစေ alpha ဒါမှမဟုတ်အထုပ်ခေါင်းဆောင်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ Alaskan Husky ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်သည် မင်းကတာ ၀ န်ရှိတယ် နှင့်သင်၏အာဏာကိုစိန်ခေါ်ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ဤတွင်အနည်းငယ်သောလုပ်ရန်နှင့် alpha အဖြစ်လိုက်နာရန်မလိုပါ:
မင်းအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ် ထွက်ဝင်ထွက်ပထမ ဦး ဆုံးတ တံခါးကတဆင့်
ခေါင်းဆောင်အမြဲတမ်းသင့်ပါတယ် ပထမဆုံးစားပါ ။ သင်၏ခွေးနှင့်စားသောက်ပြီးသည့်နောက်မှသင်၏ခွေးကိုကျွေးပါ။
သင့်ရဲ့ Alaskan Husky သူ့ကိုပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းမယ့်အစားလမ်းထဲကရွှေ့ပါစေ။
သင့်ခွေးကိုသူတောင်းဆိုသည့်အခါတိုင်းဂရုမစိုက်ပါနှင့်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတ်မှတ် သင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သာသူ့ကိုသင်၏တိတ်တဆိတ်အာရုံစိုက်စေပါ။
သင့်ရဲ့ Alaskan Husky ကသူ့အားသတ်မှတ်ထားသင့်သည် အိပ်areaရိယာ ။ သင့်ရဲ့ခွေးကိုသင်နှင့်အတူအိပ်ရာထဲမှာဘယ်တော့မှခွင့်မပြုပါနဲ့။
သင့် Alaskan Husky သည်တသမတ်တည်းရှိခြင်းနှင့်ခိုင်မာမှုရှိခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်ကြားလိမ့်မည် နားထောင်ပါ အထုပ်ခေါင်းဆောင်နှင့်သူ့ကိုလေ့ကျင့်အဖြစ်အများကြီးပိုလွယ်ပါလိမ့်မည်။
ဤခွေးတစ်ကောင်သည်အပျော်ကစား။ အလွန်တက်ကြွသောကြောင့်သူတို့ကိုများစွာလိုအပ်သည် ကျန်းမာသန်စွမ်းလေ့ကျင့်ခန်း နေ့စဉ်။ သူတို့ကအများကြီးလိုတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Alaskan Husky လိုအပ်ပါတယ် လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းဆုံးတစ်နာရီ နေ့တိုင်း။ သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှစ်ခုမှ 20 မိနစ်သွက်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ် jogging ၏တစ်နာရီပါဝင်သင့်ပါတယ်။ သင်စက်ဘီးစီးလိုပါကအနီးအနားရှိသင်၏ခရီးများ၌သင်၏စက်ဘီးကိုသူနှင့်အတူပြေးခိုင်းပါစေ။
သင်၏ Husky ကဲ့သို့သောအားကစားများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည် sledding နှင့် skijoring ၎င်းသည်သူ၌ရှိသည့်စွမ်းအင်အားလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေမည်။
ဤသည်ခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့သောအားကစားအတွက် Excel ပါလိမ့်မယ် သွက်လက် နာခံခြင်း၊ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကသူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဦး နှောက်နှစ်ခုစလုံးကိုလေ့ကျင့်ဖို့အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မယ်။
သင်၏ Husky သည်အိမ်နောက်ဖေးတွင်အချို့သောကစားနည်းများကိုပျော်မွေ့လိမ့်မည်။ ဤခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဖြစ်ကြသည် လွတ်မြောက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေ ။ သူတို့ကအောင်မြင်သော jumpers နှင့်တူးဖော်သူများပါပဲ။
အဆောက်အ ဦး များကသင်၏ခွေးကိုသိမ်းဆည်းထားပါ အနည်းဆုံး6ပေအရပ်ချောမွေ့သစ်သားခြံစည်းရိုး သင့်ရဲ့ခြံဝန်းကျင် built ။ ချောချောမွေ့မွေ့သောသစ်သားသည်ခြံစည်းရိုးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊
သင့်ခွေးသည်အထူးသဖြင့်နွေးထွေးသော၊ နေသာသောနေ့များတွင်သင်ကိုယ်တိုင်မလွန်ပါစေနှင့်။ ဖြစ်နိုင်တယ် အပူ သင့်ရဲ့ Alaskan Husky ထဲ၌နောက်မှပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးပြtoနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ Husky လမ်းလျှောက်ထွက်မလာသောအခါ, သင်ကဲ့သို့အချို့သော ဦး နှောက်ဂိမ်းများနှင့်အတူသူ့ကိုအလုပ်ရှုပ်နိုင်ပါတယ် တူတူပုန်းတမ်း နှင့်ဘဏ္treာအမဲလိုက်ခြင်း။ ပဟေPuzzleိကစားစရာများနှင့်ဝါးကစားစရာများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ဤခွေး၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။
Alaskan Huskies သည်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများစွာကိုအထူးသဖြင့်မိဘမျိုးဆက်များတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
Alaskan Huskies ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေအချို့မှာ -
သင့်ရဲ့ Husky လည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် Alaskan Husky Encephalopathy ခွေးပေါက်စတွင်တွေ့နိုင်သည့်မပျောက်နိုင်သော ဦး နှောက်ရောဂါဖြစ်သည်။ ဒီအခွအေနေကြောင့်ခွေးရဲ့စနစ်တကျ၎င်း၏အစားအစာထဲမှာ thiamine process မှနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြissuesနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Alaskan Husky ဘယ်လောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နေထိုင်မှာလဲ။
Alaskan Husky သည်ပျမ်းမျှသက်တမ်းရှိသည် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ ။ သငျသညျကိုပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများအတွက် VET မှသူ့ကိုယူပြီး, သူ့ကိုသင့်လျော်သောအစားအစာပေးခြင်းနှင့်သူလုံလောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းရရှိသွားတဲ့အားဖြင့်သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့ဘဝတိုးချဲ့ကူညီနိုင်သည်။
Alaskan ပြာများသည်စွမ်းလွယ်သောခွန်အားမြင့်မားသောခွေးများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်လိုအပ်သည် အရည်အသွေးမြင့်အစားအစာများ သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်အတန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကယ်လိုရီများကြွယ်ဝ။
အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်သော Alaskan Husky တွင်နေ့စဉ်အနည်းဆုံးကယ်လိုရီ ၁၁၀၀ လိုအပ်သည်။
အဆင့်မြင့် Alaskan Huskies သည်ကယ်လိုရီ ၁၀၀၀ လိုအပ်ပြီးတက်ကြွနေသော Huskies များ - စွတ်ဖားများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပါ ၀ င်သူများသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်သူများကဲ့သို့အနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။ 1800 ကယ်လိုရီ နေ့တိုင်း။
သင်၏ Alaskan Husky သည်အနည်းဆုံးပါ ၀ င်သည့်အစားအစာကိုပေးရန်ရည်ရွယ်သည် 22% ပရိုတိန်းနှင့် 8% အဆီ ။
မြင့်မားသောပရိုတင်းပါဝင်မှုသည်သင်၏ခွေး၏အဆစ်များကိုကျန်းမာစေပြီးကျန်းမာသောကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အဆီပါဝင်သောအရာသည် Husky ၏စွမ်းအင်အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ကျန်းမာသော Alaskan Husky တွင်သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသားများနှင့်ငါးများပါ ၀ င်သည့်အစားအစာရှိသင့်သည် ဆယ်လ်မွန် ။ ဤခွေးများသည်ငါးကိုကောင်းကောင်းစားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလက်စကာရှိစလင်းပိုင်ခွေးများစားသောအရာဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ခွေးကိုပေးရှောင်ကြဉ်ပါ ဆော်လမွန်ငါး သို့သော်၎င်းတွင်အရိုးများနှင့်ကပ်ပါးကောင်များပါ ၀ င်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Husky ၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောခွေးစာကိုစားနိုင်သည်။ သူ့ကိုပေးပါ ခြောက်သွေ့တဲ့ခွေးစာခွက် ၃ မှ ၄ ခွက် နှစ်ခုအစားအစာများသို့ခွဲထွက်။ သင့်ခွေးမှာအမြဲတမ်းရေချိုရှိသင့်သည်။
အသားပရိုတင်းများအပြင်စီးပွားဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်း kibble တွင်လည်းထည့်သွင်းနိုင်သည် အပင်ပရိုတိန်း သင်၏ Husky မှအကျိုးရှိမည့်ပဲဟင်းနှင့်ပဲများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
သင်၏ Alaskan Husky ခွေးကလေးအားအောက်ပါအစားအစာများကိုမကျွေးရန်ကြိုးစားပါ။
ဂျုံ၊ နို့မှုန့်၊ နို့မှုန့်နှင့်နို့ကြွယ်ဝသောအစားအစာများ
မင်းရဲ့ Husky ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်ကျွေးမွေးသင့်သလဲ
သင်၏ Alaskan Husky ခွေးကလေးအားကျွေးမွေးသင့်သည် တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ် ။ သူသည် (တစ်နှစ်ခန့်အကြာ) ရင့်ကျက်မှုအပြည့်အ ၀ ရောက်သောအခါသင်သည်ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည် နေ့စဉ်နှစ်ခုအစားအစာများ ။
Alaskan Husky ခွေးဖြစ်ကြ၏ မကြီးဘူး ။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုမရှိသည့်အခါသူတို့သည်များသောအားဖြင့်အစာစားကြမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကိုအစာကျွေး နှစ်နာရီ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီသူတို့၏စွမ်းအင်နှင့်လုံလောက်သောစွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လုံလောက်သည်။
အဆိုပါ Alaskan Husky တစ်ရှိပါတယ် Self- သန့်ရှင်းရေးကုတ်အင်္ကျီ ဒါကြောင့်သူကအခြားဝတ်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သတို့သားဖို့များသောအားဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
ဒီခွေး အတန်အသင့်သွန်းလောင်း နှင့်အကြောင်းကို brushing လိုအပ်ပါသည် နှစ်ပတ်မှသုံးကြိမ် ။
စဉ်အတွင်း ရာသီသွန်းလောင်း ကြီးမားသောသားမွေးများထွက်ကျသောအခါအကြီးအကျယ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်မှုတ်ထွက်ခြင်းများကိုမျှော်လင့်ပါ။
သင်သည်သင်၏ခွေးရဲ့အင်္ကျီကို brush ဖို့လိုအပ်ပါတယ် နေ့စဉ် ဒီကာလအတွင်း။ ဖုန်စုပ်စက်ကိုမကြာခဏသုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ။
ရေချိုး တစ် ဦး Alaskan Husky နိမ့်ဆုံးမှာထားသင့်ပါတယ်။ ဤခွေးသည်ပုပ်စပ်သောမျက်နှာနှင့်မရပေ တစ်ချိန်က - တစ်လရေချိုး ။ သင်၏ခွေးတစ်ကောင်ကိုရေချိုးသောအခါ VET အတည်ပြုထားသောခွေးခေါင်းလျှော်ရည်ကိုအသုံးပြုရန်သေချာစေပါ။
သူ့ သွား ဖြစ်ဖို့လိုတယ် နေ့စဉ် brushed သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်အပတ်စဉ်။ ခွေးသွားတိုက်တံနှင့်သွားတိုက်ဆေးကို သုံး၍ သင်၏ Alaskan Husky သည်ခွေးကလေးဖြစ်နေသေးစဉ်ထိုအကျင့်ကိုစတင်ပါ။
လက်သည်းညှပ် လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် တစ်လတစ်ကြိမ် ။ သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ညှပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင့်ခွေးကိုထိခိုက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်၎င်းတို့ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမဖြတ်ရန်သတိထားပါ။
သင်၏ Husky ၏နားရွက်များကိုစစ်ဆေးသင့်သည် တစ်ပတ်တစ်ခါ ယားယံခြင်း၊ နီခြင်း၊ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းနှင့်ဖယောင်းများတည်ဆောက်ခြင်းလက္ခဏာများအတွက်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ခွေးကလေးရဲ့သန့်ရှင်းရေး နားရွက် VET ခွင့်ပြုသည့်သန့်စင်ဆေးရည်တစ်လုံးနှင့်သုံးခြင်း။
သင် Alaska Husky ခွေးကလေးကိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်ရွေးချယ်ရန်စဉ်းစားသောအခါတွင်စဉ်းစားရမည့်ကုန်ကျစရိတ်အချို့ရှိပါသည်။ စတင်အဘို့, Husky ခွေးကလေးသူ့ဟာသူ၏စျေးနှုန်းရှိပါတယ်။
ထိပ်ပြိုင်ကားလိုင်းမှ Alaskan Husky ခွေးများသည်မည်သည့်နေရာမှမဆိုကုန်ကျနိုင်သည် $ 10,000 မှ $ 15,000 တစ်ခုချင်းစီကို! အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဂုဏ်သိက္ခာရှိသောမျိုးပွားသူထံမှပြိုင်ကားမစီးသောကျန်းမာသည့် Alaskan Husky pup သည်ကုန်ကျသည် $ 1,000 မှ $ 1500 ။
သေတ္တာ၊ ကော်လာ၊ leash၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ အိပ်ယာနှင့်ဖလားစသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ကန ဦး ကုန်ကျစရိတ်များကုန်ကျနိုင်သည် $ 220 ။
spaying သို့မဟုတ် neutering စသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ရိုက်ချက်များ၊ သွေးစစ်ဆေးမှုများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း၊ $ 290 သင်နေထိုင်ရာပေါ် မူတည်၍ ။ ရိုက်ချက်များ၊ ခွေးလှေးများ၊ tick ကာကွယ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အာမခံကိုရရှိလိမ့်မည် $ 485 ။
နှစ်စဉ်အရည်အသွေးမြင့်ခြောက်သွေ့သောခွေးအစားအစာနှင့်ခွေးပေါက်စကလေးများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကျဆင်းလိမ့်မည် $ 235 ကစားစရာ၊ အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးနှင့်လိုင်စင်တို့ကဲ့သို့သောအခြားအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များမှာရှိနေသည် $ 265 တစ်နှစ်။
မင်းရဲ့ Husky အသစ်ကိုဘယ်မှာရမလဲ
သင် Alaskan Husky ကိုအိမ်ပြန်ချင်လျှင်သင်၌ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ သင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့် Alaskan Husky ခွေးကလေးကိုလိုချင်လျှင်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမှာက မျိုးဆက် ။
မျိုးဆက်အားလုံးသည်တန်းတူညီမျှမဖန်တီးခဲ့ကြသောကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမျိုးဆက်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်သင်သုတေသနအချို့ပြုလုပ်ရမည်။ မှန်ကန်သောမျိုးပွားသူကသင့်အားသူ၏ခွေးပေါက်စများနှင့်မိဘများဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားများကိုပေးနိုင်သည် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး ။
သငျသညျအလည်အပတ်ခရီးအဘို့အလာကိုခွင့်အတွက်အဘယ်သူမျှမတှနျ့ဆုတျရှိပါလိမ့်မယ်သူတစ် ဦး မျိုးဆက်များရွေးချယ်ဖို့လိုသည်။ အဆိုပါခွေးပေါက်စတစ် ဦး ၌နေထိုင်ရပါမည် သန့်ရှင်းကျယ်ဝန်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် သူတို့ကသူတို့ရဲ့အမှိုက်သရိုက်များနှင့်မိဘများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းရပါမည်။
ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ရှိပါတယ် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မျိုးဆက်များ ကြည့်ရှုရန်:
သမင် Creek အဘိဓါန် Sleddogs (Wyoming)
ရန်အချိန်မရှိပါ အိမ်သူအိမ်သားတစ် ဦး ခွေးကလေးလေ့ကျင့် ? သင့်တွင် Alaskan Husky ကိုမွေးစားရန်သင်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိသည်။ ခွေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားခြင်းသည်များသောအားဖြင့် ပို၍ တတ်နိုင်သည်။ ကံကောင်းခြင်းနှင့်သင်အိမ်သို့ခေါ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည် အဟောင်းခွေး ကြောင်းပြီးသားအိမ်မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အခြေခံပညတ်တော်တို့ကိုသိတယ်။
မွေးစားခြင်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်ပါကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် Huskies ကိုအာရုံစိုက်သည့်အမိုးအကာများကိုစစ်ဆေးပါ။
မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား Sled ခွေးကယ်ဆယ်ရေး (ကယ်လီဖိုးနီးယား)
ဗဟို Husky ကယ်ဆယ်ရေး (ဥက္ကလာဟိုးမား)
Tahoe Husky ကယ်ဆယ်ရေး (မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား / မြောက်ပိုင်းနီဗားဒါး)
အဆိုပါ Alaskan Husky တစ် ဦး နှင့်အတူဖော်ရွေခွေးဖြစ်ပါတယ် အေးဆေးတည်ငြိမ်သောသဘောသဘာဝ ။
သူကသူ့မိသားစုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းချစ်သောသူ, သူသည်ကလေးများန်းကျင်တစ် ဦး ငြိမ်ဝပ်စွာနေသဘောထားကိုရပါလိမ့်မယ်။
ဒီအပျော့ပျောင်းစွမ်းအင်မျိုးကွဲ စွန့်စားခန်းတွေကိုနှစ်သက်တယ် , ဒါကြောင့်သူကတက်ကြွစွာလူနေမှုပုံစံနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ဝါသနာပါသောသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအဖော်တစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
သင်နှင့်အတူနေ့တိုင်းသင်ပြေးထွက်သွားမည့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုလိုချင်ပါသလား။ ဤသည် Husky ကတက်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်၊ သင် Alaskan Husky သည်စဉ်းစားရမည် မိုးသည်းထန်စွာသွန်းလောင်းရန်အလယ်အလတ် ထို့ကြောင့်သူသည်ခံစားနေရသောလူများအတွက်မှန်ကန်သောခွေးတစ်ကောင်မဖြစ်နိုင်ပါ ဓာတ်မတည် လွှဲရန်။
မင်း Alaskan Husky ကိုမင်းပိုင်ဆိုင်သလား။ ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသတ္တဝါများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြံအစည်များကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်မျှဝေပါ။
အဆိုပါ Pomsky တစ် Triple-A Crossbreed: ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော, Active ကိုနှင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်
Powerful Pitbull Mastiff ရောနှောမှုအကြောင်းကိုသင်သိထားသင့်သမျှ
Golden retriever ဂျာမန်သိုးထိန်းရောနှော
အရွယ်ရောက်ပြီးသောအဖြူရောင် siberian husky
teacup chihuahua ခွေးပေါက်လေးများပုံများ
အနက်ရောင် labrador ရွှေ retriever ရောနှော